सुपथ मुल्यमा खसी–बोका बिक्री वितरण हुने ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
सुपथ मुल्यमा खसी–बोका बिक्री वितरण हुने !
काठमाडौं, २५ असाेज । दसैंलाई लक्षित गर्दै नेपाल खाद्य संस्थानले शुक्रबारदेखि सुपथ मुल्यमा खसी, बोका र च्याङग्रा बिक्री वितरण सुरु गर्ने भएको छ। नेपाल खाद्य संस्थान, बागमती अञ्चल कार्यालयले थापाथलीस्थित कार्यालय परिसरबाट शुक्रबारदेखि दसैंका लागि खसी, बोका र च्याङग्रा बिक्री वितरणको काम सुरु गर्ने जानकारी गराएको हो।
संस्थानका लागि बागमती अंचल कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्रराज विष्टले बिक्रीका लागि बिहिबार बिहानसम्म ९० वटा खसी, बोका र ५ सय ५० वटा च्याङग्रा काठमाडौं आईपुगेको जानकारी दिए। भोलिसम्म मुस्ताङबाट १ हजार वटा च्याङग्रा काठमाडौं ल्याउने योजना बनाइएको छ भने हेटौंडाबाट ९ सय १० वटा खसी, बोका काठमाडौं ल्याउने संस्थानको योजना छ। शुक्रबार विहान ८ बजेदेखि खसी, बोका र च्याङग्रा बिक्री वितरण हुनेछ। बजार भाउलाई हेरेर खसी, बोका र च्याङग्राको मुल्य निर्धारण गर्ने पनि संस्थानले जनाएको छ। संस्थानका बागमती अञ्चल कार्यालयका प्रमुख विष्टले बजारको भन्दा सस्तो मुल्यमा मासुको विक्री वितरण हुने बताए।
बिहीबार बेलुकासम्म संस्थानले मासुको मुल्य निर्धारण हुने जनाएको छ। संस्थानले हरेक वर्ष थापाथलीस्थित बागमती अञ्चल कार्यालय परिसरबाट दसैंका लागि सुपथ मुल्यमा खसी, बोका र च्याङग्रा बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ। यस वर्ष बाटो अप्ठयारो भएका कारण मुस्ताङबाट च्याङग्रा
ल्याउन कठिनाई भईरहेको पनि संस्थानले जनाएको छ।